ပတ်ချန်းယော (အဆိုတော်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤသည်မှာ ကိုရီးယားလူမျိုးအမည် ဖြစ်ပြီး; မျိုးရိုးအမည် မှာ ပတ်။
(1992-11-27) နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၁၉၉၂ (အသက် ၂၉)
Voice Type(s) Lyric Baritone
ပတ်ချန်းယော(박찬열) (နိုဝင်ဘာ ၂၇ ၁၉၉၂ ဖွား)သည် တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်နှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယား-တရုတ် ယောက်ျားလေးအဆိုတော်အဖွဲ့ EXO နှင့် ၎င်းအဖွဲ့ငယ် EXO-K မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၃.၁ ပါဝင်အားဖြည့်သော အနုပညာရှင်အဖြစ်
၄.၆ သီချင်းဗီဒီယိုတွင် ပါဝင်ခဲ့မှု
၅ ဆုနှင့် ဇကာတင်ဆုဝင်ခဲ့မှုစာရင်း
ပတ်ချန်းယောကို ၁၉၉၂ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်၊ ဆိုးလ်းမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် ဆိုးလ်မြို့၊ Apgujeong-dong ရှိ ဟွန်ဒိုင်းအထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ သူ၏အမ ပတ်ယိုရာသည် ဆိုးလ်မြို့ရှိ MBC Broadcasting Station မှ အစီအစဉ်ကြေညာသူ(Announcer) တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ မိဘများသည် ဆိုးလ်မြို့တွင် အီတာလျံရိုးရာအစားအစာ စားသောက်ဆိုင် "Viva Polo" ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် ချန်းယောသည် ကိုယ်ပိုင် ဂီတအဖွဲ့ထူတောင်ခွင့်ရခဲ့ရာ Block B အဖွဲ့မှ P.O နှင့် သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိတွင် သူသည် Kyung Hee Cyber University တွင် Culture and Art Management မေဂျာကို EXO မှ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသော ဆူဟို၊ဘတ်ဟွန်း၊ ကိုင်တို့နှင့်အတူ သင်ကြားလျက်ရှိရှိသည်။
မူလတန်းကျောင်းသားဘဝတွင် School of Rock ရုပ်ရှင်ကားကို ကြည့်မိရာမှ ချန်ရိုးသည် ဂီတအနုပညာကို စိတ်ဝင်းစားလာခဲ့ရာ များမကြာမှီပင် ဒရမ်ကို စတင်တီးခတ်ခဲ့သည်။ အလယ်တန်းကျောင်း၏ ပထမနှစ်ကျောင်းသားဘဝတွင် သူ၏ သူငယ်ချင်းများနှင့် တီးဝိုင်းတစ်ခုတွင် ၃ နှစ်မျှ သူတို့နှင့်အတူ ဝင်ရောက် တီးခတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ Smart Model Contest တွင် ဒုတိယ ဖြစ်လာသောအခါ သူသည် SM Entertainment ၏ သင်တန်းသားအဖြစ် လက်ခံခဲ့သည်။ S.M. တွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားနေစဉ်တွင် သူသည် ရပ်ပီး(rapping)ရွတ်ဆိုခြင်းကို အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃-၂၄ ရက်တွင် မနီလာမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော ၂ ရက်ကြာ EXO'luXion ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင် သူသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်တွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်အတွက် နေခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
ချန်းယောသည် အထက်တန်းကျောင်း ပထမနှစ်တွင်၂၀၀၈ Smart Model Contest တွင် ဒုတိယ ဖြစ်လာသောအခါ သူသည် SM Entertainment ၏ သင်တန်းသားအဖြစ် လက်ခံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျောင်းမှ တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဖြစ်သော "Siren" တီးဝိုင်းတွင်သည် ပါဝင်ခဲ့ရသည်။ သူ၏အဖွဲ့ဖြစ်သော EXO အဖွဲ့ ပွဲဦးထွက်မစခင်ပင် သူသည် စောလျင်စွာ မီဒီယာများစွာတို့တွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် TVXQ အဖွဲ့၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော "HaHaHa Song" ရုပ်သံသီချင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Girls' Generation အဖွဲ့၏ ဂျပန်သီချင်းခွေ(single) "Genie" တွင်လည်း ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Girls' Generation အဖွဲ့မှ TaeTiSeo ၏ "Twinkle" သီချင်းတွင်လည်း ၂၀၁၂ က ဝင်ရောက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ချန်းယောသည် EXO အဖွဲ့၏ ၈ ဧပြီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မတိုင်ခင်ထိ လေးနှစ်တာမျှ လေ့ကျင့်ခဲ့ရသည်။
ချန်းယောသည် EXO အဖွဲ့ တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ပရိသတ်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူသည် ဂျေဆန် မာ့စ် နှင့် အမ်မီနမ်တို့ကို သူအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသူများအဖြစ် ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။ သူသည် ရော့ခ်အဆိုတော်အဖွဲ့များ ဖြစ်ကြသော Muse၊ Green Day၊ Nirvana တို့၏ ဖန်ဖြစ်ပြီး အလယ်တန်းကျောင်းသားဘဝတွင် X-Japan အဖွဲ့တို့ကိုလည်း နှစ်သက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင့် ချန်းယောသည် Royal Villa ရုပ်သံစီးရီးတွင် ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင် အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ I၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် SBS ၏ Law of the Jungle in Micronesia ရုပ်သံစီးရီးတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး Roommate ရုပ်သံစီးရီးတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ရာ အချိန်ဇယားရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် စက်တင်ဘာလတွင် နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် Salut d'Amour ရုပ်ရှင်တွင် ကြော်ငြာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ရာ ထိုရုပ်ရှင်တွင် EXO Next Door ဝက်ဘ်ရုပ်သံစီးရီးတွင် သူနှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော Moon Ga-young လည်းပါဝင်သည်။ သူသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Dating Alone ရုပ်သံစီးရီး တွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် မေ ၁၅ တွင် ချန်းယောသည် သူ၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဘတ်ခ်ဟွန်း၊ ချန်းတို့နှင့်အတူ တခြားအနုပညာရှင်များဖြစ်ကြသော Girl's Day၊ Sistar၊ Niel နှင့် Ailee တို့ပါဝင်ကာ KBS1 ရုပ်သံလိုင်း၏ အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်သော 'I Am Korea' theme song မှ"The Day We Met"(for Gwangbok 70th Anniversary) ကို သီဆိုခဲ့သည်။
ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်တွင် ရုပ်ရှင်ရိုတ်ကူးစဉ် ဘရုနိုင်းကို လည်ပတ်ခဲ့သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် "Last Hunter" ဆိုသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် The Law of The Jungle - Hidden Kingdom Special in Brunei ၏ OST ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ချန်းယောသည် Overdose စီရီးမှ EXO-K version "Run" သီချင်းအတွက် ရပ်စသားနှင့် Promise (EXO 2014) ကိုရီးယားဗားရှင်းကို ချန်းနှင့်အတူ ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် EXO အဖွဲ့၏ ဒုတိယမြောက် အယ်ဘမ် EXODUSကိုပြန်လည် ပြောင်းလဲထုတ်ဝေခဲ့သော "Love Me Right" အယ်ဘမ်တွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ နောက်တွင် သူသည် Star Wars နှင့် EXOအဖွဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့သော Lightsaber သီချင်းတွင် ရပ်စာသားကို ရေးပေးခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် EXO အဖွဲ့၏ 2015 EP Sing For You တွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ 
၂၀၁၄ "Bad Girl"
(ဟင်နရီ feat. ချန်းယော)
KOR (DL): 27,192+
ဖြန့်ချိခြင်း: ဇူလိုင် ၁၄ ၂၀၁၄
(Zhou Mi feat. ချန်းယော)
— — — Rewind
ဖြန့်ချိခြင်း: အောက်တိုဘာ ၃၁ ၂၀၁၄
၂၀၁၅ "Don't Make Money"
(Heize feat. ချန်းယော)
KOR (DL): 31,275+
ဖြန့်ချိခြင်း: နိုဝင်ဘာ ၆ ၂၀၁၅
* China's chart positions are derived from Baidu Weekly Singles Charts.
Note: Billboard Korea K-Pop Hot 100 was introduced in August 2011 and discontinued in July 2014
၂၀၁၅ "Last Hunter" SBS Law of the Jungle - Hidden Kingdom Special in Brunei OST Published on his SoundCloud
"듣는편지 (Listen To The Letter)" —
"All of Me " Exology Chapter 1: The Lost Planet Cover of John Legend's Song
၂၀၁၆ "You Are" — Published on his SoundCloud
၂၀၁၄ "Run" EXO-K Overdose Co-written (Rap lyrics)
၂၀၁၅ "Lightsaber" EXO Sing for You Co-written with MQ, Jung Ju-hee
၂၀၁၅ Salut d'Amour Min-sung ဇာတ်ပို့
၂၀၁၆ So I Married An Anti-fan Hoo Joon ဇာတ်ဆောင်
၂၀၀၈ High Kick! High School Kid KBS2 Ep. 71
၂၀၁၃ Royal Villa Himself jTBC Ep. 2
၂၀၁၅ EXO Next Door Fictional version of himself Naver TV Cast ဇာတ်ဆောင်
၂၀၁၃ Idol Star Athletics Championships Competitors MBC Team A: ချန်ရိုး၊ ဘတ်ဟွန်း၊ ဆူဟန်၊ တာအို၊ လူဟန်၊ ဆူဟို
Challenge 1000 Songs SBS Guest ချန်၊ D.O. နှင့်အတူ
Hello Counselor KBS Ep. 131 (ခရစ်၊ ဆူဟို နှင့်အတူ)
Infinity Challenge MBC Special Guest Ep. 345
Immortal Songs2KBS Guest Ep. 114 (ဘတ်ဟွန်း၊ ချန်၊ ဆူဟို၊ လူဟန်နှင့်အတူ)
Mamma Mia KBS Ep. 21
Star Face-Off SBS Guest လေး၊ ချန်၊ D.O.နှင့်အတူ
Law of the Jungle SBS Ep.90-94
၂၀၁၅ Star Golden Bell KBS Guest New Year Special
Dating Alone JTBC Virtual lover Ep. 11 and 12
Hello Counselor KBS Guest ချန်၊ ဘတ်ဟွန်းနှင့်အတူ
Guerilla Date KBS ရှီမင်း၊ လေး၊ ဆူဟန်၊ ချန်၊ ကိုင်နှင့်အတူ
Infinity Challenge MBC Special guest Ep. 424
The Return of Superman KBS Guest ဘတ်ဟွန်းနှင့်အတူ
Law of the Jungle SBS Ep. 175 - 177
Unpretty Rapstar Mnet Season2Ep.9- Heize ft. Chanyeol
Grade One Freshman Hunan Ep. 9
၂၀၁၂ Hong Jin Kyung2O'clock ဧည့်သည် KBS Cool FM EXO-K နှင့်အတူ
Younha’s Starry Night MBC Standard FM
၂၀၁၃ ShimShimTapa MBC Standard FM
Sukira- Kiss the Radio KBS Cool FM EXO နှင့်အတူ
KBS Cool FM KBS Cool FM
Cultwo Show SBS Power FM ဘတ်ဟွန်း၊ ဆူဟို၊ ကိုင်၊ D.O.၊ ခရစ်၊ ရှီမင်း၊ လေးနှင့်အတူ
KBS World Radio Arabic KBS Cool FM EXO နှင့်အတူ
ShimShimTapa Special DJ MBC Standard FM ရှီမင်းနှင့်အတူ
Volume Up Guest KBS2FM ဆူဟို၊ D.O.နှင့်အတူ
ShimShimTapa MBC Standard FM EXO နှင့်အတူ
Cultwo Show SBS Power FM ဆူဟို၊ ဆူဟန်၊ ဘတ်ဟွန်း၊ D.O.၊ ကိုင်နှင့်အတူ
Kim Shin-young's Noon Song Of Hope MBC Standard FM EXO နှင့်အတူ
Younha's Starry Night MBC Standard FM ဆူဟိုနှင့်အတူ
Oven Radio Main 1theK Originals Ep.3The Star (ချန်ရိုး၊ ခရစ်၊ ဆူဟန်၊ Kai နှင့် Tao)
Ep.5The First Snow (ဆူဟို၊ Kai၊ Kris၊ Chanyeol နှင့် EXO)
၂၀၁၄ ShimShimTapa Guest MBC Standard FM EXO-K နှင့်အတူ
Sukira - Kiss the Radio KBS Cool FM D.O.၊ ဆူဟန် နှင့်အတူ
Jang Yoon-ju's Rooftop KBS Cool FM Kai နှင့်အတူ
၂၀၁၅ Sukira - Kiss the Radio KBS Cool FM EXO နှင့်အတူ
Sunny<meta />'s FM Date MBC Standard FM
Old School SBS Power FM ဆူဟို၊ Kai နှင့်အတူ
Park Myeongsoo<meta />'s Radio KBS Cool FM
၂၀၁၃ Music Bank Special MC KBS ဘတ်ဟွန်းနှင့်အတူ (၇၊၆၊၂၀၁၃)
Music Bank KBS D.O.နှင့်အတူ (၁၂၊၇၊၂၀၁၃)
M!Countdown Mnet (၁၊၈၊၂၀၁၃)
Music Bank KBS ဘတ်ဟွန်းနှင့်အတူ (၂၃၊၈၊၂၀၁၃နှင့် ၆၊၉၊၂၀၁၃)
Show! Music Core MBC (၅၊၁၀၊၂၀၁၃)
၂၀၁၅ Show! Music Core MBC (၂၊၅၊၂၀၁၅)
၂၀၀၈ "HaHaHa Song" TVXQ ဆူဟို၊ Kaiနှင့်အတူ
၂၀၁၀ "Genie (Japanese version)" Girls' Generation
၂၀၁၂ "Twinkle" Girls' Generation-TTS ဘတ်ဟွန်း၊ဆူဟန်၊ Kaiနှင့်အတူ
၂၀၁၃ "You Don't Know Love" K.Will ဇာတ်ဆောင်
၂၀၁၄ "Hope" H.O.T. EXO 90:2014 MV Remake
၂၀၁၅ "12:25 (Wish List)" f(x) ဆူဟိုနှင့်အတူ
၂၀၁၅ 51st Baeksang Arts Awards Most Popular Actor (Film) Salut d'Amour ဆန်ကာတင်
8th Korea Drama Awards Best New Actor EXO Next Door ဆုရရှိ
Hallyu Star Award ဆုရရှိ
↑ "EXO-K(엑소케이) 찬열, '불꽃같은 외모를 다스리는 자'"၊ The Star၊ 26-12-2014။ 6-12-2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 September 2014။
↑ "မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ" (in Korean)၊ Star News။ 16 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on2August 2017။
↑ "EXO Chanyeol : Visual of the Group'" (in Korean, English,Chinese,Arabic)၊ Mnet news။
↑ "Exo-K manual part 1: Suho, Baekhyun, Chanyeol" (in Korean)၊ Oh My News via Oh My Star၊ 2012-05-11။ 2012-05-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Suho, Baekhyun, and Chanyeol enroll as new students at Kyung Hee Cyber University! date=2014-23-11 accessdate=2015-01-12"၊ twiggo။
↑ Bulletin၊ The Manila။ CONCERT REVIEW: EXO makes history, memories with Pinoy fans (in en-US)။ 28 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "EXO-K's Chanyeol likes to smile" (in Korean)၊ Newsen၊ 2012-05-08။ 2013-07-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ EXO’s Chanyeol and Sehun to Cameo on Sitcom "Royal Villa"။ 2015-06-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ K.Will Unveils 'You Don't Know Love' Video Starring EXO's Chanyeol: Watch။ 2015-06-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ EXO's Chanyeol shares his excitement about joining 'Laws of the Jungle' | allkpop.com။ 2015-06-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "EXO’s Chanyeol to Leave "Roommate" Due to Scheduling Conflicts"၊ lovelymorning၊ 2014-09-11။
↑ "EXO's Chanyeol to Make Acting Debut With New Movie, Jang Joo Shop"၊ 2014-09-21။ 16 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 August 2014။
↑ I Am Korea 'MV filming live။
↑ EXO Reveals More Details on New Repackaged Album Ahead of Release | Soompi
↑ EXOdicted - EXO Fansite: 151111 Chanyeol wrote the rap part on Lightsaber, official download link and more info about EXO's Lightsaber!။ 20 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 March 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပတ်ချန်းယော_(အဆိုတော်)&oldid=719099" မှ ရယူရန်